Asflat Mobilisation na-aga n'ihu na Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraAsflat Mobilisation na-aga n'ihu na Ankara
23 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, Akụkọ Asphalt, General, Ụzọ Awara Awara, Turkey
ngbasa asphalt na-aga n'ihu na Ankara
Obodo Ankara na-aga n’ihu na 7/24 ọrụ asphalt na oge a na-ekwupụta ọkwa dịka akụkụ nke ịlụ ọgụ ntiwapụ coronavirus. Ngalaba nke Sayensị Science, nke rụrụ 16 tọn asphalt dị n'agbata Mee 19-23, chịkọtara mkpokọta tọn asato nke 302 n'ime naanị isi ụbọchị mgbe etinyere mgbe ọ bụla. Ndị otu ahụ mechara mezue usoro a ga-eme ndoro-ndoro na azu nke AŞTİ.
Site na mmeghe nke asphalt oge, Ankara Metropolitan Obodo emeela ka ọrụ mmeghe na nrụzigharị n'ọtụtụ akụkụ nke Isi Obodo.
N'ime oke nke ịlụso ọrịa coronavirus ọgụ, ndị otu Ngalaba Ihe Ọmụma Ihe Ọmụma nke mụbara ọrụ na ngwụsị oge ekwuputara na ngwụsị izu; Ọ rụrụ ọrụ asphalt n'ọtụtụ ebe nke obodo ahụ site na Altındağ ruo Çankaya, site na Etimesgut rue Yenimahalle.
77 puku iri na asatọ ụnyaahụ iwu dị na ọnụnọ site na APRIL ruo taa.
N’ụbọchị ekwuputara oge mmalite ahụ, ọrụ nke Ngalaba Sayensị Science, nke gara n’ihu na-arụ ọrụ karịrị otu ebe n’ihi okporo ụzọ ndị tọgbọ chakoo, mejupụtara tọn puku iri na isii na iri atọ na atọ dị na adres 16 na 19 tọn asphalt patching na address 6.
Otu 7/24; Ka a na-ebute puku mpịakọta 4 puku 69 na ụzọ n'okporo ụzọ ndị isi na isi 23 n'ime ụbọchị 392, ọ meela ngụkọta nke paịlị 77 18 site na Eprel, mgbe etinyere usoro iwu n'oge.
MAKA AŞTİ ASPHALT AGBHKA AGBATA
Ka usoro a na-ejikọ ọnụ na ịtọ ntọala, mpaghara iri abụọ site na Akyurt ruo Yenimahalle, Bala ruo Mamak, Etimesgut ruo Elmadağ bịara nwee ọhụụ na okporo ụzọ ndị ọhụrụ.
Obodo mepere emepe, nke gụnyere AŞTİ, ebe ụgbọ ala interwity dị ole na ole na-akwụsị, dịka akụkụ nke ihe ọgbụgba nke coronavirus, arụchaala ọrụ mmeghari mmezi nke emebeghị ogologo oge n'ihi mbata na ọpụpụ nke narị ụgbọ ala kwa ụbọchị. Emeghari okporo uzo di n'ihu AŞTİ site na nari puku tọn 46.
Obodo ukwu a abaala mbọ ngwa ọrụ ndozi na ngalaba Başkent. Ndi otu ngalaba ihe omuma nke Science gbara nari puku asaa na iri (7) pacenti na Abdülhalik Renda nke dị na OSTİM na puku tọn puku isii, narị isii na iri isii n'okporo ụzọ Abdülkadir Geylani.
Ọrụ Asflat malitere na Karabük
Nchikọta na nchikota nchikota na-aga n'iru n'igwu
Nchikota Ngwurugwu nke ndi mmadu
Ụzọ mgbochi Batmanda Road
Nchikota nchikota sitere na obodo ukwu
Uzungöl na Sümelaya Cable Car Mgbasa Ozi
Nchịkọta ígwè na netwọk na akụrụngwa dị iche iche malitere
Nchịkọta Cat na Zincirlikuyu Metrobus Station
Ụgbọ njem ndị mmadụ na-eme njem maka Republic na Democracy Rally na İzmir
Ihe ngosi ngosi na Izmir
IZBAN Nchikota na ugbo oha
Mgbasa Mgbasa Ozi Mmalite na Snow na okporo ụzọ okporo ụzọ
Balıkesir "Ememe Mbupu Mwepụta nke Mpempe akwụkwọ"
Nchikota nchikota na Dilovası
Nchịkọta Egwuregwu Egwuregwu na Trabzon
Nchịkọta Egwuregwu Na Na Mamak